Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Midowga Baarlamaannada Carabta uga warramay Xogta BFS – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sh. Cabdiiraxmaan, ayaa kulan, ay xalay Guddoonnada Baarlamaannada Dalalka Carabta ku yeesheen magaalada Cammaan ee caasimada dalka Joordan, waxa uu kaga faallooday xaaladda Baarlamaanka Soomaaliya iyo sida uu u shaqeeyo, waana arrin ay xalay sidaas oo kale Cammaan ka sameeyeen Guddoonnada Baarlamaannada halkaas isugu tagay.
Sida uu Xafiiska Warfaafinta ee Golaha Shacabka baahiyey, Guddoomiye Mursal waxaa la filayaa inuu kulan saacadaha soo socda Midowga Baarlamaannada Carabata uga furmi doona Cammaan ka jeediyo qudbad uu ku bartilmaameedsan doono la wadaagidda xubnaha kulankaas xogta (mid taban iyo mid toganba) Baarlamaanka Soomaaliya.
Sidaas waxaa la filayaa in ay wada yeeli doonaan dhamaan Guddoonnada dal kasta oo Carbeed Baarlamaankiisa ku matalaya kulankaas. Laakiin, kulankii xalay waxaa la sheegay in lagu dejiyey ajandaha kulanka la filayo inuu bilaaban doono saacadaha soo socda, kaas oo noqonaya kii 29-aad ee uu yeesho Midowga Baarlamaannada Carabta.
Waxyaabaha kulankii xalay lagu gorfeeyey ka mid ah waxaa ku jira in la xoojiyo xiriirka iyo wada-shaqeynta Baarlamaannada iyo Shucuubta Carabta, iyadoo si gaar ahna looga dooday arrinta xaaladda Falastiin, oo uu Midowgu si hordhac ah isugu raacay in loo muujiyo taageero wada-jir ah, oo Falastiin uga imaaneysa Midiwga Baarlamaannada Carabta.
Wasaaradda deegaanka Puntland oo ganacsatada u jeedisay in wax laga bedelo habka loo dhaqdo Geela caano-teelka ah